BBC - Drenivohitra - Nahoana no an-tapitrisany ny lehilahy Sinoa dia mijanona ho tokan-tena
BBC — Drenivohitra — Nahoana no an-tapitrisany ny lehilahy Sinoa dia mijanona ho tokan-tena
Ao Shina, misy ny anarany fa ny lehilahy tsy manam-bady ny
Mazava ho azy, ny mifanohitra mety ho marina ihany koa
Nahita fianarana tsara sy mahaleo tena ara-bola ny vehivavy izay mijanona ho tokan-tena dia antsoina hoe tsy ilaina ny zazavavy, hoy i Heather Ma, izay manambady, ao an-s ary monina ao Shanghai. Ny ray aman-dreny dia lehibe ny loharanom-ny fanerena ny mahita ny mpiara-miasa, pronto. Ary ry zareo ever-present, hoy i Roger Zhou, izay efa manambady sy mipetraka ao Suzhou. Ny ray aman-dreny mihevitra fa izy ireo dia tompon’andraikitra amin’ny fanampiana ny olon-dehibe ny ankizy manomboka amin’ny fianakaviana, hoy izy. Noho izany, dia manery ny ankizy iray mba hahita ny mpiara-miasa, mandeha ny fiarahana ary mba hiomana ho amin’ny fampakaram-bady. ‘Ny jamba daty, izay nalamin’i ray aman-dreny, dia mbola tena malaza, hoy i Melinda Hu, iza moa ny tokan-tena. Ny ray aman-dreny miatrika lehibe ara-tsosialy kiana raha ny vavy na ny zanaka tsy mahazo manambady ka ara-dalàna ny ankizivavy s ray aman-dreny dia maniry hamela ny vavy any amin’ny jamba daty sy ny hanambady alohan’ny hahatrarana.
Avy eo dia misy ny eny an-kalamanjana ny fanambadiana tsena
Ao amin’ny iray amin’ny firenena lehibe indrindra ao Shanghai, ny matchmaking zorony dia nahazo ray aman-dreny izay lahatsoratra tanana voasoratra dokam-barotra noho ny iray ny ankizy miaraka amin’ny antsipirihany toy ny vola miditra, ny fanabeazana sy ny maha-izy azy. Ray aman-dreny sasany no fantatra mba hitsidika ny tsena isan-kerinandro nandritra ny taona maro amin’ny tsy fahombiazana. Ny fiovan’ny fomba ny olona hihaona sy ny fomba ny olona woo ny mpiara-miombon’antoka, dia, indrindra indrindra, ny fametrahana ny lehibe kokoa ny fanamafisana ny fitiavana fa tsy azo ampiharina ny fepetra tsy toy ny fiarovana ara-bola. Jun Li, ohatra, hoy izy dia tsy maika ny hanambady tia kokoa ny miandry ny olona izay mendrika ny fo sy ny fanahy. Ny fanehoan-kevitra momba ity tantara ity, na na inona na inona koa no tsy maintsy hita ao amin’ny BBC Renivohitra, masìna ianao, lohan’ny ny Facebook pejy na hafatra antsika amin’ny amin’ny Twitter.
Sheng nan, izay midika ambin ny olona mbola tsy nahita ny vadiny sy any amin’ny firenena tsy dia ny fitomboan’ny hantsana lahy sy ny vavy, fa misy olana lehibe. I shina no manana an-tapitrisany maro kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy, ny hangover ny firenena ny politikan’ny zaza tokana, izay nakarina tany, na ny vokatry haharitra am-polo taona mihoatra. Ny fitoviana amin’ny lahy sy ny vavy dia mahatonga azy ho sarotra ho an’ny olona maro ny mahita mpiara-miombon’antoka sy ny hantsana dia mety hanitatra. Avy, ny s tombanana hisy tapitrisa kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy mitady mpiara-miasa. Ao ny boky, Ny isan’ny Mponina ho avy, Amerikana ara-toe-karena Nicholas Bernstadt mitanisa vinavina izany, mihoatra noho ny ampahefatry ny lehilahy Sinoa ny s dia tsy maintsy manambady. Ankehitriny, miaraka vitsy lavitra ny vehivavy noho ny lehilahy, ny hazakazaka mba mety hahita mpiara-miombon’antoka sy handresy azy eo alohan’ny olon-kafa no nahatonga ny olona sasany ho any ny lehibe halavan’ny mba hahita vady. Izy dia mandany vola be amin’ny famoronana, indraindray tsy nahomby, fepetra mba hahazo ny vehivavy iray. Ao, Sinoa mpandraharaha tao an-s voalaza fa nanenjika iray mipetraka any Shanghai fampidiran-dresaka sampan-draharaha noho ny tsy mahita azy ny vadiny, rehefa nandoa vola ny orinasa tapitrisa yuan (dolara m) ny fitondran-tena be dia be ny fikarohana. Ny amin’ny raharaha iray hafa, ny solosaina rindrambaiko avy any amin’ny tanàna atsimon’i Guangzhou nividy iPhones ho toy ny ampahany amin’ny an-tsipiriany ny fanambadiana soso-kevitra ny olon-tiany. Indrisy anefa, dia nihodina teo, ny fahafaham-baraka vao mainka mampitombo ny sary ny zava-nitranga dia niely fatratra manerana ny media sosialy. Anisan’ny olana dia ny antitra sy ny fomba vaovao ny fihaonana olona tsy foana ny miara-miasa. Taom-Baovao sinoa efa ela no fahafahana ho an’ny tokan-tena ny olona hihaona amin’ny mpiara-miasa. Ny ankamaroan’ny olona mitsidika ny trano, ny fianakaviana sy ny namany nandritra ny fetibe, izay mitranga eo anelanelan’ny faran’ny volana janoary sy ny tapaky ny volana febroary, ka singletons maro mety hihaona mety ho mpiara-miombon’antoka. Fa fa ela dia ela ny fomban-drazana ny fivoriana ny mpiara-miasa mety efa nanome lalana ny modernity. Online mampiaraka dia tsy mitsaha-mitombo ny fifadian-kanina ao Shina, ho toy ny any an-kafa, sy ny hafatra fampiharana toy ny WeChat, dia miha malaza ny fomba ny mahafantatra ny olona. Shina mampiaraka dia lasa bebe kokoa, misokatra kokoa sy tsara kokoa ny fomba Tandrefana ny firenena tao anatin’izay taona vitsy izay, hoy ny Zanany Li. Tanora taranaka manana safidy bebe kokoa, ary izy ireo dia manaraka ny fony fa tsy ny ray aman-dreny. Marobe ny fomba mba hifandray miaraka amin ny vehivavy maro an’isa manana upended ny fomba ny olona hihaona sy ny fitsarana ao Shina. Jun Li, avy ao Suzhou amin’ny farintany Jiangsu, ao Shina s atsinanana afovoany-tsiraka, ny tokan-tena, sy ao an-s. Izy no nahatsikaritra tsy mitsaha-mitombo isa ny olona tao amin’ny ny tokan-tena toe-javatra ny fikarakarana araka ny ekipa sy ny fandraisana mpiasa avokoa ny vahoaka toerana fialam-boly ho an’ny mampiaraka zava-nitranga. Olona hafa no mamadika ny psikology sy stylists mba ho tena manintona kokoa. Ary mba tsy prying fanontaniana avy inquisitive ray aman-dreny, ny sasany aza dia miroso amin’ny fandraisana mpiasa avokoa sandoka vehivavy sakaizany mba hanolotra ny ray aman-dreny mampiasa ny fampiharana, toy ny Manakarama Ahy mivezivezy eny. Tatitra milaza ny fandraisana mpiasa avokoa ny sipa mety lany, yuan (dollars) ny andro iray. Ny olana ho an’ny olona eo amin’ny fitadiavana mpiara-miasa no tena matsilo amin’ny mahantra ny faritra ambanivohitra, dia nanao ratsy amin’ny lava-natao ny fomban-drazana fa ny vadiko dia tsy maintsy ho afaka manolotra mendrika ny haavon’ny fiarovana ara-bola, fony izy tsy afaka hahazoana ny vadiny. Hong Yang, izay efa manambady, ao an-s, dia mamaritra izany amin’ny maha Shina ny reny-in-lalàna, toe-karena. Raha olona te-hanambady, ny ho avy reny-in-lalàna dia mangataka fa izy aloha no nividy trano talohan’ny miresaka momba ny dingana manaraka. Izany no antony iray mahatonga ny vidin-trano no tena mahery vaika tao anatin’ny taona vitsivitsy, hoy izy. Fa izany enta-mavesatra ara-bola eo amin’ny olona ihany koa ny fanaovana azy io sarotra ho an’ny vehivavy maro ny mahita ny mpiara-miasa. Fa manampy ny olana, miaraka amin’ny maro ny lehilahy, amin’ny ampahany noho ny ara-bola ny vola lany ny fanambadiana, dia opting hanambady taty aoriana. Ary rehefa izy no nanorim-ponenana teo izy ireo, dia matetika no mitady ny vehivavy tanora kokoa. Taona banga ny roa taona na mihoatra, dia fahita any amin’ny Sinoa ny fanambadiana. ‘Sarotra ho an’ny vehivavy ny hahita mety ny olona rehefa tonga taona, hoy Hong Yang. Maro afaka lehilahy Sinoa te-hanambady ny tanora sy tsara tarehy ireo zazavavy. Ny vehivavy kosa, mijery ny ara-bola ho an’ny fahamarinan-toerana, izay mitehina mankany amin’ny antitra ny olona, manam-pahaizana milaza.
Nahita fianarana tsara sy mahaleo tena ara-bola ny vehivavy izay mijanona ho tokan-tena dia hoe tsy ilaina ny zazavavy, hoy i Heather Ma, izay manambady, ao an-s ary monina ao Shanghai. Ny ray aman-dreny dia lehibe ny loharanom-ny fanerena ny mahita ny mpiara-miasa, pronto. Ary ry zareo ever-present, hoy i Roger Zhou, izay efa manambady sy mipetraka ao Suzhou. Ny ray aman-dreny mihevitra fa izy ireo dia tompon’andraikitra amin’ny fanampiana ny olon-dehibe ny ankizy manomboka amin’ny fianakaviana, hoy izy. Noho izany, izy ireo fanerena ny ankizy iray mba hahita ny mpiara-miasa, mandeha ny fiarahana ary mba hiomana ho amin’ny fampakaram-bady. ‘Ny jamba daty, izay nalamin’i ray aman-dreny, dia mbola tena malaza, hoy i Melinda Hu, iza moa ny tokan-tena. Ny ray aman-dreny miatrika lehibe ara-tsosialy kiana raha ny vavy na ny zanaka tsy mahazo manambady ka ara-dalàna ny ankizivavy s ray aman-dreny dia maniry hamela ny vavy any amin’ny jamba daty sy ny hanambady alohan’ny hahatrarana. Hijery sary ny Ray aman-dreny skoto ny fifaninanana amin’ny fanambadiana tsena rindrina ao Shanghai (Sary: Almay) Dia misy ny eny an-kalamanjana ny fanambadiana tsena. Ao amin’ny iray amin’ny firenena lehibe indrindra ao Shanghai, ny matchmaking zorony dia nahazo ray aman-dreny izay lahatsoratra tanana voasoratra dokam-barotra noho ny iray ny ankizy miaraka amin’ny antsipirihany toy ny vola miditra, ny fanabeazana sy ny maha-izy azy. Ray aman-dreny sasany no fantatra mba hitsidika ny tsena isan-kerinandro nandritra ny taona maro amin’ny tsy fahombiazana. Ny fiovan’ny fomba ny olona hihaona sy ny fomba ny olona woo ny mpiara-miombon’antoka, dia, indrindra indrindra, ny fametrahana ny lehibe kokoa ny fanamafisana ny fitiavana fa tsy azo ampiharina ny fepetra tsy toy ny fiarovana ara-bola. Jun Li, fa ohatra, hoy izy dia tsy maika ny hanambady tia kokoa ny miandry ny olona izay mendrika ny fo sy ny fanahy. Ny fanehoan-kevitra momba ity tantara ity, na na inona na inona koa no tsy maintsy hita ao amin’ny BBC Renivohitra, masìna ianao, lohan’ny ny Facebook pejy na hafatra antsika amin’ny amin’ny Twitter
Shinoa Ankizivavy Chat ho an'ny Android APK-Download-ny →